Ciise nama uusan barin in aan ku dhawaaqo cadaabka iyo mugdiga. Wuxuu na siiyay farriin rajo. Wuxuu noo sheegay inaan u sheegno adduunka in noloshu ay kaliya bilaabaneyso halkii ay "iska koobi lahayd". Injiilku wuxuu ku saabsan yahay isaga, cidda uu yahay, waxa uu qabtay, iyo waxa suurogal ah taas aawadeed. Markii Ciise xabaashiisii ​​ka soo xoomay, wax walba way is beddeleen. Wax walba wuu cusboonaysiiyay. Isaga xaggiisa ayuu Ilaah soo furtay oo la heshiisiiyay wax kasta oo jannada ku jira iyo waxa dhulka jooga (Kolosay 1,16: 17-XNUMX).
Muuqaalkan cajiibka ah waxaa lagu soo koobay waxa loogu yeero aayadda dahabiga ah ee Injiilka Yooxanaa. Nasiib darrose, aayaddan si fiican ayaa loo ogaa in awoodeedii ay noqotay mid caajis ah. Laakiin dib u fiiri aayaddan. Si tartiib ah u dheefso, oo u oggolow xaqiiqada la yaabka leh inay runtii ku dhex gasho: "Ilaah baa dunida jacayl u qabay, inuu siiyey wiilkiisa keliya, sidaa darteed in kuwa isaga rumaystaa aysan lumin, laakiinse ay lahaadaan nolosha weligeed ah" ( Yooxanaa 3,16:XNUMX).
Injiilku ma ahan fariin cadaab iyo cadaab ah. Ciise wuxuu si cad ugu cadeeyay aayaddan soo socota: "Ilaah muu u soo dirin wiilkiisa dunida inuu xukumo dunida, laakiin duniduu ku badbaadi doonaa isaga" (Yooxanaa 3,17:XNUMX).
Ilaah wuxuu u soo baxay inuu badbaadiyo adduunka, oo uusan burburin. Taasina waa sababta ay noloshu u muuqanayso rajo iyo farxad, ee ma aha rajo xumo iyo cabsi cabsi gelin. Ciise wuxuu ina siiyay faham cusub oo ah waxa ay tahay in dadku ahaado. Ka fog in lagu jiheeyo gudaha, waxaan ku noolaan karnaa wax-soo-saar iyo qaab-dhismeed adduunkan. Haddii aan fursad helno, waa inaan "ku dadaalnaa qof walba wanaag, gaar ahaan kuwa iimaankeenna leh" (Gal 6,10:XNUMX). Dhibaatada ka jirta Dafur, dhibaatooyinka soo ifbaxaya ee isbedelka cimilada, colaadaha ka socda Bariga Dhexe iyo dhammaan dhibaatooyinka kale ee ku dhowda gurigeenna waa arrinteenna. Mu'miniin ahaan, waa inaan is is ilaalinaa oo aan sameynaa wixii karaankey ah ee aan ku caawin karno - oo aannaan fadhiyin dhinacna u istaagin oo si dhuumaaleysi ah nooga maqnaato: "Waan kuu sheegnay".